Fomba fiainana eo an-toerana.
Fanaparitahana anaty lasitra miaraka amin'ny lightweigh.
Fandrakofana lalina sy matoky tena.
Webbing mavesatra volom-borona miaraka amina kofehy manify.
Karazana vokatra Fiarovan-doha an-tanàn-dehibe
Laharana maodely Urban helmet VU102
TECHNOLOGY EPS + PC in-bobongolo miaraka amin'ny molony malefaka
endri-javatra maivana, loha mendrika fampiononana, famolavolana lamaody
Manitatra safidy Visor azo esorina
Ny fiarovan-doha an-tanàn-dehibe dia manolotra fomba be pitsiny miaraka amin'ny haitao avo lenta fiarovana, manao azy ho mifanentana amin'ny fomba fiainanao eo an-dàlana. Ny akorandriaka ao anaty mould dia manampy amin'ny fiarovana tsara kokoa eny an-dalambe.
Visor azo alaina amin'ny bisikileta azo esorina izay manome lanja ny fombanao nefa tsy manimba ny rivotra. Izy io dia ahitana endrika tsy misy mombamomba azy feno enta-mavesatra manampy ny mpitaingin-tsoavaly sy ny mpandeha an-tany hampiasa bebe kokoa amin'ny diany.
Ity fiarovan-doha ity dia miaraka amina akorandriaka PC EPS + avo lenta miaraka amin'ny haitao mandroso miaraka amin'ny maivana be. Mandritra izany fotoana izany dia manome anao traikefa tena tsara mitafy. Ny fiarovan-doha voamarina miaraka amin'ny fenitra CE (EN1078) sy CPSC izay azo amidy eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fitsapana feno fepetra toy ny hatsiaka mangatsiaka, hemi mafana ary curbstone lena. Ny fiarovan-doha natao ho an'ny lohantsika mahazatra dia mamorona fampiononana tena tsara ho an'ny lohan'ny mpitaingin-tsoavaly miaraka amin'ny lafiny iray izay mety tsara ho an'ny eropeana sy amerikana. Ny fonosana mangatsiaka avo lenta dia mitazona ny volo ho maina sy mangatsiaka mandritra ny mitaingina azy, namolavola pads amin'ny fitaovana sy teknolojia vaovao ho an'ny safidin'ny ODM isika: landy silika, antibaktera / volotsangana, lamination PC / PP ary padding seamless TPU.
Ny fehin-kodiarana namboarina dia iraka ataontsika ho an'ny tontolo iainana hatrany, manome safidy hafa koa izahay amin'ny tarika taratra, sublimation ary silipe stripe amin'ny tranokala, ho fanampin'izany, manana safidy bebe kokoa amin'ny fanamboarana izahay: tenona maro loko, volotsangana ary fehy fanoherana bakteria.
Ny buckle ITW marika miaraka amin'ny fitaovana Derlin POM mba hahazoana antoka fa voaaro ny fiarovana, voamarina amin'ny fitazonana sy fitiliana mihodina mba hiantohana ny fiarovana ny fiarovan-doha.
Miaraka amin'ny rafi-pitantanana famolavolana rivotra izay nohatsaraina izay manana toerana telo misy ny fanitsiana mitsivalana, mora ny manitsy ny fihenjanana amin'ny tanana iray ary manome ny aina sy ny tsara indrindra. Ny fehin-kibo azo avy amin'ny fitaovana malefaka sy maharitra ho fiarovana tsara kokoa ary manitsy mora foana ny fikajiana amin'ny alàlan'ny fanodinana fingotra. Ny rafitra azo esorina sy azo soloina dia manome fanitsiana tonga lafatra amin'ny fanamorana.
Teo aloha: Ski Helmet sy Kids V01Kid
Manaraka: Ny fonosana PC marobe dia miaro ny fiarovan-doha scooter an-tanàna VU103